बैंकबाट कुन कुन शीर्षकमा पाइन्छ घरकर्जा ? - Sidha News
बैंकबाट कुन कुन शीर्षकमा पाइन्छ घरकर्जा ?
हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ, आफ्नै घर होेस् । ‘पैसा कमाएर घर बनाउँछु’ भन्नुभयो भने सपना पूरा गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ । तपाईंको सपना तत्काल साकार पार्न बैंक र वित्तीय संस्था तम्तयार छन् । घर वा फ्ल्याट खरिद गर्ने योजना बनाउनुस् अथवा पुरानो घरलाई विस्तार र मर्मतसम्भार गर्नुहोस्, तपाईंको योजनामा बैंकहरू लगानी गर्छन्, त्यो पनि आकर्षक ब्याजदरमा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर बनाउनका लागि जग्गा किन्न लिइने ऋणलाई पनि घरकर्जाकै श्रेणीमा राखेको छ । घर किन्न, घर बनाउन, आवास विस्तार एवं मर्मत गर्न र भविष्यमा घर बनाउन जग्गा किन्ने प्रयोजनमा बैंकबाट लिइने ऋणलाई घरकर्जा अथवा होमलोन भनिन्छ ।
घर किन्नुभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो बजेटको आकार निश्चित गर्नु आवश्यक छ । पहिले नै प्रस्ट हुनुहोस् कि तपाईंसँग कति नगद छ र कतिसम्म ऋण थेग्न सक्नुहुन्छ ? घर खरिद गर्ने स्पष्ट बजेटको खाका दिमागमा राखेपछि बल्ल घरकर्जाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा निम्न किसिमका ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।
१) घर खरिद ऋण
यो सबैभन्दा चल्तीको घरकर्जा हो । घर वा फ्ल्याट खरिद गर्नका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्नेका लागि केही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म घरकर्जा उपलब्ध गराउँछन् । यो रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन हुँदैन । पहिलो पटक घरजग्गा खरिद गर्ने ग्राहकले काठमाडौं उपत्यकामा पनि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन् ।
२) घर निर्माण कर्जा
यदि आफ्नै जग्गा छ र त्यसैमा घर बनाउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई बैंकहरूले ‘घर निर्माण कर्जा’ शीर्षकमा ऋण दिन्छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा फेयर मार्केट भ्यालु र घरको इस्टिमेटेड कस्टमा ५० प्रतिशतसम्म र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । यदि फस्र्ट होम बायर भएको खण्डमा देशैभर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । तपाईंले ऋण लिनका लागि बनाउन लागिएको घरको इस्टिमेटेड कस्ट बैंकमा बुझाउनुपर्छ ।
बैंकलले जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु र घर (डिजाइन/नक्सा)को इस्टिमेटेड कस्ट जोडेर औसत मूल्यांकन निकाल्छन् । त्यही मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । यदि तपाईंले बनाउन लागेको घरको अनुमानित खर्च बैंकले निकालेको औसत मूल्यांकनको ५० प्रतिशतभित्र अटाएको खण्डमा शतप्रतिशतसम्म पनि ऋण पाइन्छ ।
३) जग्गा खरिद कर्जा
यदि तपार्इं आफ्नो नियमित आम्दानीबाट थोरै–थोरै बचत गरेर जग्गा खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने जग्गा खरिद गर्नकै लागि पनि वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । घर बनाउने उद्देश्य राखेर जग्गा खरिद गर्नेका लागि बैंकहरूले धितो मूल्यांकनको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्छन् ।
यो ऋणको ब्याज पनि अन्य घरकर्जाकै सरह हुनेछ । पाँच वर्षदेखि ३५ वर्ष अवधिको ऋण पाइन्छ । अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइन्छ । तर, तपाईंले निश्चित समयभित्र घर बनाउने भनेर बैंकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ‘यति समयसम्म घर बनाउँछु’ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकले पनि ‘प्रोडक्ट पेपर गाइडलाइन्स एप्प्रुभ’ गरेर राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । नत्र, जग्गा किन्दा रियल स्टेट कर्जामा गणना हुन्छ ।
४) घर विस्तार एवं मर्मतसम्भार कर्जा
पुरानो घर साजसज्जा वा मर्मत गर्नुपरे पनि घरकर्जा शीर्षकमा ऋण पाइन्छ । यो ऋण लिने प्रक्रिया पनि घर निर्माण कर्जाकै सरह हो । बैंकहरूले इन्जिनियरले तयार पारेको इस्टिमेटेड कस्टमै आधारित भएर ऋण दिने गर्छन् । नेपालका अधिकांश बैंकले यस्तो कर्जा दिन्छन् । यो ऋण पनि धितो मूल्यांकन, अनुमानित खर्च र आम्दानीकै आधारमा प्रवाह गर्छन् ।
५) सम्झौतामा आधारित घरकर्जा (एड्भान्स होमलोन)
कुनै अपार्टमेन्ट वा कोलोनी बैंकको बिनालगानी डेभलप भइरहेको अवस्थामा डेभलपर, बायर र बैंक (बायरलाई फाइनान्स गर्ने) बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ऋण लिन सकिन्छ । सम्झौतामा डिटेल (विवरण) लेखिएको हुन्छ । निर्माणको अवधिभर उक्त पोपर्टी डेभलपरकै नाममा हुन्छ । सुरुमै टुक्राउन मिल्दैन । निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने बेलामा बल्ल कित्ताकाट गरेर नामसारी गरेपछि मात्र बैंकको नाममा धितो बन्धक हुन्छ । त्यो बेलासम्म त्रिपक्षीय सम्झौताले नै काम गर्छ । पोपर्टी नामसारी नहुँदासम्म डेभलपर जिम्मेवार हुन्छ । कस्टमर (ग्राहक)को जिम्मेवारी समयमा साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने हो ।
६) प्रि–अप्रुभ घरकर्जा
नेपालमा एनएमबी बैंकले प्रि–अप्रुभ होमलोन सुरु गरेको छ । यो एकदमै नयाँ घरकर्जा हो । यो ऋणको प्रक्रिया पनि अरू होमलोनसरह नै हुन्छ । यसमा एउटै फरक हुन्छ, तपाईंसँग बैंकमा देखाउन कुनै पोपर्टी हुँदैन । तपाईंले आफ्नो आम्दानीको प्रमाणित कागजात र अरू आवश्यक कागजात पेश गरेपछि बैंकले यतिसम्म घरकर्जा दिन सकिन्छ भनेर ऋण स्वीकृत गरी ‘इन्टिमेसन लेटर’ दिन्छ । सुरुमै धितो देखाउन पर्दैन । ९० दिनभित्र आफुले किन्ने निधो गरेको घर÷फ्ल्याट धितो बन्धक राख्न ल्याए हुन्छ ।
बैंकले इन्टिमेसन लेटरमा घर यति फुटको बाटोमा हुनुपर्छ, घर यस्तो हुनुपर्छ, जग्गाको बजार मूल्य यतिसम्म हुनुपर्छ लगायत विभिन्न मापदण्ड तोकिदिएको हुन्छ । त्यो मापदण्डभित्र पर्ने पोपर्टी पहिचान गरेपछि बैंकले धितो बन्धक राखेर ऋण दिन्छ । तपाईंको आम्दानी हेरेर बैंकले यतिसम्म ऋण दिन सकिन्छ भनेर इन्टिमेसन लेटर दिइसकेपछि तपाईंले ढुक्कसँग आफ्नो क्षमताअनुसारको घर खोज्न जान सक्नुहुन्छ ।
७) संयुक्त घरकर्जा
संयुक्त घरकर्जा यस्तो कर्जा हो, जुन एकै समय एकभन्दा बढी व्यक्तिद्वारा सामूहिक रूपमा लिन सकिन्छ । यो ऋण परिवारको कुनै सदस्यसँग मिलेर लिन सकिन्छ, जसमा तपाईंकी पत्नी वा पति, आमाबुुबा र भाइबहिनी सामेल हुन सक्छन् । ऋण लिने व्यक्तिको इच्छा वा उमेरका कारण पनि संयुक्त होमलोन लिइन्छ ।
मुख्यतः संयुक्त आवास कर्जा लिनुका दुई कारण हुन्छन् । पहिलो, एक व्यक्तिको आम्दानीले किस्ता तिर्न नपुग्नु, दोस्रो उमेरका कारण लोन लिने अवधि लामो बनाउन नसक्नु । नेपालका बैंकले आफ्नो आन्तरिक नीतिअनुसार ६० देखि ७० वर्षसम्म अन्तिम किस्ता बुझाउने गरी मात्र ऋण दिन्छन् । तर, संयुक्त होमलोनले यी दुवै समस्याको समाधान दिन सक्छ ।